Magic Earth, ilay mpitety GPS vaovao Route 66 | Androidsis
Sintomy ny Magic Earth izao, ilay navigator GPS Route 66 vaovao izay hanafahanao azy
Indraindray, mandritra ny fanaoko mahazatra ny Google Play Store, ilay fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android, dia gaga sy talanjona tanteraka aho nahita ireo rindranasa Android mahavariana toy ilay holazaiko etsy ambany. Ny fampiharana dia tsy misy hafa fa navigator GPS vaovao noforonin'ireo mpamorona ny Route 66, iray amin'ireo mpitsidika voalohany izay nomeko voninahitra ny fitsapana tamin'ny PDA taloha. Ny anarany, Magic Earth.
Na dia talanjona tamin'ny horonantsary eo an-tampon'ity lahatsoratra ity aza ianao izay anehoako anao ny mampiavaka azy rehetra Tany Tany, Tsy maintsy milaza aminao aho fa izay rehetra nasehoko anao tao anatin'ilay horonan-tsary dia miditra amin'ny fampiharana maimaim-poana, ny zava-drehetra na ny fisintomana feo mpitari-dalana na ny fisintonana sarintany hivezivezena aza tsy mila fifandraisana Internet. Ho an'ny zavatra tokana izay tsy maintsy lalovantsika ao anaty boaty, fa isaky ny mila izany satria asa tsy voatery atao dia ny mamela ny mombamomba ny fifamoivoizana amin'ny fotoana tena izy.
1 Inona no atolotry ny Magic Earth antsika?
2 Lahatsary momba ny Magic Earth ny navigator GPS amin'izao fotoana izao
2.1 Izay rehetra atolotry ny Magic Earth antsika sy ny toerana hahitana azy eo amin'ny sehatry ny fikirakirana
2.2 Magic Earth amin'ny hetsika
4 Sintomy ny Magic Earth maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny Magic Earth antsika?
Manolotra antsika i Magic Earth fitetezana GPS manondro teboka, izany dia varavarana isam-baravarana miaraka amin'ny fiasa gTorolàlana amin'ny feo amin'ny fiteny maro.
Izay rehetra atolotray antsika, fitetezana isam-baravarana amin'ny alàlan'ny feo, fisintomana sarintany ho an'ny fivezivezena ivelan'ny Internet, feo fampidinana, fampitandremana haingam-pandeha sy fakantsary fiarovana, manao daholo ny zava-drehetra maimaimpoana ary tsy misy fepetra. Ny hany zavatra tsy maintsy andoavantsika fahazoan-dàlana, raha liana isika, dia ho an'ny safidin'ny fanambarana momba ny fifamoivoizana amin'ny fotoana tena izy, safidy iray amin'ny raharahan'i Eropa rehetra dia hivoaka amin'ny vidiny tsy azo tohaina ihany. 9,95, XNUMX euro isan-taona, tsy isalasalana fa vidiny tsy azo resena raha oharina amin'ireo mpitety GPS hafa eny an-tsena.
Anisan'ireo fiasa asongadiny, tsara ny manonona ireto fiasa manaraka ireto:
Teknolojia OpenStreetMap miaraka amin'ireo mpampiasa maherin'ny 2 tapitrisa izay manohana azy.
Fikarohana isaky ny fihodinana. Làlana hafa, fetran'ny hafainganam-pandeha, fitarihana ny làlana ary ny takelaka fifamoivoizana misy torolàlana mazava.
Fakan-tsary haingam-pandeha sy fanairana haingam-pandeha. Mitsitsia vola be amin'ny tapakila mandeha haingana.
Sarintany azo sintonina. Sintomy ny sarintany maimaimpoana ary aza sorohana amin'ny Internet ny findainao.
Fampahalalana momba ny toetr'andro. Safidio ny toetrandro mivantana avy amin'ny sari-tany amin'ny toerana maherin'ny 100.000 na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Wikipedia. Lahatsoratra Wikipedia 500.000 XNUMX mahery no azo tsongaina avy amin'ny sari-tany, rahoviana ary aiza no tena ilainao.
Fifamoivoizana HD. Manaraka an-tsakany sy an-davany ny toetran'ny fifamoivoizana ankehitriny ny Magic Earth. Hotazoninay foana ianao amin'ny làlan-kaleha haingana indrindra ary hampahafantarinay anao ny fomba hafa azo alaina. Rehefa mivezivezy ianao dia hampahafantatra anao tsy tapaka ny fotoana azonao atao. HD Traffic dia mampiasa ny mombamomba ny fivezivezena voalohany an'ny TomTom, ary azo alaina ho fividianana fampiharana.
Lahatsary momba ny Magic Earth ny navigator GPS amin'izao fotoana izao
Izay rehetra atolotry ny Magic Earth antsika sy ny toerana hahitana azy eo amin'ny sehatry ny fikirakirana
Magic Earth amin'ny hetsika
Feo azo sintonina maimaim-poana
Safidy fisintomana sarintany maimaimpoana tanteraka
Fampitandremana maimaim-poana sy maimaim-poana
Torolalana mazava sy fohy
Fifanarahana somary tsotra
Sintomy ny Magic Earth maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Magic Earth Navigation sy Sarintany
Developer: Majika ankapobeny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Sintomy ny Magic Earth izao, ilay navigator GPS Route 66 vaovao izay hanafahanao azy
ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny #MagicEarth ilay mpitety GPS vaovao # Route66
Eduard dia hoy izy:
Ny zotra 66 dia nametraka ahy nametraka an'ity kinova ity tamin'ny toerany rehefa manavao izy ary tsy mandeha izy. Ary nandoa izany.
Mamaly an'i Eduard
Jose Ramon dia hoy izy:
Ny marina dia efa nampiasako hatry ny ela ary tiako be dia be, ny hany lafy mety hapetrako dia amin'ny làlan'ny mpandeha an-tongotra satria rehefa alaminao ny lalana, tsy milamina ny sari-tany, manomboka mihodina daholo izy ny fotoana
Mamaly an'i Jose ramon
Cernadas dia hoy izy:
Ny lesoka lehibe dia tsy mitondra ny «Follow Me», izany hoe ny fanarahan-dia ny fiara virtoaly, mahamenatra izany, satria izay no nampiavaka azy
Valiny tamin'i Cernadas
Kamalbb dia hoy izy:
Efa nanandrana GPS maromaro aho fa ity avy amin'ny fomba fijeriko no tsara indrindra, misaotra ry zalahy
Mamaly an'i Kamalbb
[APK] Opera Mini nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny famindrana angona